Yaa Oromoo!! PPn(Naafxanyaan) irratti wal fixaa jiran Oromiyaadha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Oromoo!! PPn(Naafxanyaan) irratti wal fixaa jiran Oromiyaadha.
Hunduu naannoo ofii harkatti galfatee jira. Tan abbaaf hin galin tan hundi qirchachuufii saamuuf irratti wal lolaa jiru Oromiyaadha. Maqaa Federaalaanis tan Federaalli harkatti galfatee borcaa jirus Oromiyaadha. Maaddiin irratti wal fixaa jiran Oromiyaadha. Hidhaa fi gadadoon akka Oromiyaa keessa jirtuu tun naannoo biraatti mul’ataa hin jiru.
Karaa Nagaa Cufuun, karaan Lolaa akka banamu gochuu dha.
Mootummaan Abiy adeemsa siyaasa karaa nagaa cufaa jira. Oromiyaa keessatti roorroon hamaa ummata oromoo irra gahaa jira. ABO waltajii siyaasaa karaa nagaa keessaa dhiibanii abasuuf amma illee karaa hundaan hojjacha ajiru. Oromiyaa giddu-galaa, naannoo Meedaa Qanyiitii keessaa Taappellaa Waajjira ABO buqqisanii jiru.
Namni kamuu Waajjira ABO akka hin seennes dhorkanii jiru. Miseensoat ABO Meedaa Qanyi hidhanii jiru.
Hiree karaa nagaa cufuun, akka hireen HIDHANNOO leellassmu gochuu dha.
Hireen Karaa Nagaa jiru, cufuun warruma cufe miidha! Oromoon silas hunda isaatti ni beeka; waanti haarawaa hin jiru.
Waldhabdeen Paartii Nafxega Bilxiginnaa keessatti uumamte akkuma itti fufeetti jirti!!
“Abiyyi Ahimad Lammaa Magarsaa Waajjiruma isaa keessatti akka hidhamu godheera ganama har’aa Eegdoota (Security) Lammaa duraanii jijjiiruun ijoollee saba Amaaraa ramadeefii jiran!!
Sabni Lammaa maaltu afaan qabe jadhee gaafacha jira gocha Abiyyi Lammaa irratti hojjacha jiru kana ummata Oromoo biraan amuma ga’ii” Bilxiginnaa Diigama jirti!!
Down Down Abiy, Down Down prosperity party!!
Gaaffii Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa Biyya keessafi Alaa Lammaa Magarsaa gaafachaa jiran!!!
~ Lammaa Magarsaa Waadaan sitti kaninee Ati Abiy Ahmeditti kannite eessa gahe?
~ Lammaa Magarsaa Ati Bilxiginnaa akkuma mormiteetti jirtamoo Bilxiginnaatti baqate?
~ Yoo Bilxiginnaatti Baqxe Maaliif ifa nu godhuu didde?
~ Osoo Oromiyaan diigama jirtu maaliif Callisu filatte?
~ Imaanaan Ummaatni sitti kanne, Qeerroo kuma shani irratti wareegame Wayyaanee Maqaleetti galche isiin 4kiloo galche Atis akkuma Abiy Ahmed Nafxegatti gurguratte?……..fi..kkf Gaaffii kana irratti Lammaa Magarsaa hatattamaan gadi bahee Ummata Oromoof deebii kennu qaba!!
Dinnaan isaas ijuma Abiyyi Ahimad ilaalla ganaa!!!
Sagalee Qeerroo Oromiyaa, ummata Oromoo, Biyya keessafi alaa irraa!!!